Indlela Kuhlangana kwaye Umhla Isitshayina Girls - e-Asia Dating Ingcaphephe
Indlela Kuhlangana kwaye Umhla Isitshayina Girls – e-Asia Dating Ingcaphephe
Namhlanje, sisebenzisa apha ukuthetha malunga njani uyakwazi kuhlangana GIRLS kwi-CHINA. Ukuba ukhe ubene a gay dude, ke uxolo, eli nqaku mhlawumbi uphumelele ukuba akuncede. Kufuneka kwakhona ngaphezu free ukuba isicelo a apho kuhlangana dudes kwi-China inqaku kwaye mna ll kuyibhala nangona mna andinaku lesithembiso, kuya kuba esihle kakhulu Eli nqaku uzakuba yahlula phezulu kwi ezahlukeneyo imimandla. Okokuqala: Ukuqonda Isitshayina girls kwaye Isitshayina inkcubeko kunye societal amaxabiso Isiqingatha. Okwesibini: Ukuqonda Isitshayina girls kwaye Isitshayina inkcubeko kunye societal amaxabiso Isiqingatha. Okokugqibela: eyona ndlela kuhlangana kunye ukutsala Isitshayina girls, dibanisa njani jula ugange izinti phezulu a ubudlelwane kunye nabo. Mna nento yokuba ufuna omnye umzekelo-icatshulwe olukhawulezayo nto phambi siqala, ukuba ngaba ll indulge kum. Kwi-China, yintoni ubona njani izinto ngqo ingaba phantse rhoqo ezahluka-hlukileyo. Wonke umntu ufumana wearing a isigqumathelo. Ngokuqinisekileyo, le yinyaniso malunga ehlabathini jikelele, ngaphezulu nje kwi-China ngaphezu kwenye indawo. Oku kuza kwenza ngakumbi evakalayo ukuba ve sele ukuba China kwaye kufuneka experienced i-inkcubeko. Ubomi a Isitshayina kubekho inkqubela iyaguquguquka kakhulu kuxhomekeke kwayo inqanaba isimo kwaye indawo society. Avareji ukuba kulungile ujonge hayi-ke-otyebileyo girls iya kuba constantly pressured ukuzalisekisa nabazali babo’ okulindelweyo ngokomthetho nzulu, umsebenzi, kwaye ke umtshato. Zonke girls kuza, nangona kunjalo, ukuchitha ezininzi ixesha ukubukela i-tv, iyalalaprocess status, kwaye amehlo. Isitshayina society hasn t programmed abantu ukuba abe ngaphandle kokuya, kuba ilanlekile ka-imisetyenzana yokuzonwabisa, okanye nantoni na ukuba isn t productive ngokomthetho wemfundo kwaye imali, ngoko ke musa t ilindele Isitshayina girls ukuba abe popping phezulu kunye umdla bits ukuba ubomi babo. Ekubeni wathi ukuba, ndikuvayo mna kufuneka kanjalo phoselani phandle ukuba Isitshayina girls ingaba kuba kakhulu ngakumbi kokuya kwi kunokuba ucinga. Layo s a Isitshayina habit kuphela vula ukuya kwi-abahlobo ekude kakhulu malunga ubomi bakho kunye bolunye uhlanga isn t kakhulu eqhelekileyo. Isitshayina girls iyakwenza iimboniselo kwaye ikholisa umdla abantu, ayo s nje ukuba babe musa t kuba kangangoko inkululeko okanye free ixesha kuba socializing okanye imisetyenzana yokuzonwabisa kodwa thankfully lento chu ukutshintsha. Ikomishini abantu idla ukuchonga kakhulu kunye zabo umsebenzi wabo imisetyenzana yokuzonwabisa. Isitshayina abantu k ubonakala ngathi ukuchonga ngaphezulu nge isimo sabo inqanaba kwaye yimalini imali bathe, nto leyo yenza abantu abaninzi ukuba abe kakhulu kakhulu efanayo. Umzekelo, nayiphi na kubekho inkqubela othe ezininzi umdla, elizimeleyo, kwaye sele travelled kakhulu ngu elihle okanye umdla, kwaye oku isetyenziswe ngokulinganayo ukuze Isitshayina girls ingxaki kukuba uninzi girls musa t ukufumana ithuba ukwenza oku ngaphandle kokuba ingaba kakhulu otyebileyo. Isiphumo kukuba wonke ubani a pretty efanayo ubomi amava ngabo bonke ukuzama ukufumana enye socially condoned sikazwelonke: Okulungileyo Amabakala, bangena elungileyo ngezifundo, umsebenzi Olungileyo, Ezilungileyo BF kwaye Umtshato isiphumo kusenokuba kakhulu boring interactions. Uza kuba phindo ukwenza into iincoko kunye uninzi girls ngenxa yokuba uninzi girls kwaye wonke umntu ongomnye kwi-China zithe pushed ngokusebenzisa le ARABIC umntu umatshini. Ngaba end phezulu kunye abantu abaninzi enxiba efanayo ngaphambili. Ngaphantsi komhlaba, nangona, yi decent isixa-mali individuality kwaye kunokwenzeka coaxed ngaphambili. Anyways, incopho kukuba kufuneka baqonde ukuba kukho ezithile izitshixo apho umsebenzi kunye Isitshayina abantu inkcubeko kakuhle kakhulu, ngenxa ngokulula ezininzi ngabantu kakhulu efanayo. Uninzi girls uza ukuchitha ixesha labo studying isebenza kwaye ngexesha labo free ixesha iya: shop, kudla, wavuma e-KTV (umhleli wencoko yababininame), kulala, jonga DVDs okanye oludlulileyo ethandwa kakhulu Plt-TV bonisa, kwaye athabathe narcissistic iifoto ka-ngokwabo (kukho nkqu okhethekileyo ikhamera yenzelwe ngokukodwa kuba ngokwenza mna-ingongoma). Kunjalo, abanye girls waphula ulwakhiwo. Kukho ngaphandle kwabafundi otyebileyo okanye ithathwe-care-girls abo musa t kufuneka umsebenzi. Baya idla hamba phakathi yokufumana zabo nails kwenzeka, inqwelo, ifumana zabo iinwele kwenzeka, kwaye amehlo, ne-occasional ithebhule e a bar okanye ecula e-KTV baphoselwe. Asingabo bonke inqwelo ufumana enye nangona. Mna nento yokuba ufuna distinguish phakathi iindidi ezimbini: otyebileyo kubekho inkqubela inqwelo amahlwempu kubekho inkqubela inqwelo. Otyebileyo kubekho inkqubela inqwelo apho ufuna ukuthenga iqelana ka-iimboniselo kwaye ke get ikofu okanye badle into kunye nabahlobo, ngoko uyakwazi bonisa ngaphandle ntoni bought. Abanye girls nkqu ngeposi iifoto ukuba WeChat (A messaging loluntu app) ukubonisa ngaphandle. Amahlwempu kubekho inkqubela inqwelo, yi-umahluko, apho ufuna ntoni ikakhulu window inqwelo kwaye mhlawumbi kuthenga into cheap okanye akukho nto kwaphela, kwaye kwangoko kufuneka ahlangane phezulu kunye abahlobo bakho, kudla ukutya, thatha imifanekiso lokutya, kwaye ngaphaya koko, abo imifanekiso kwi-WeChat kwi-lieu ye-expensive purchases. Cinga ubuso njengoko jonga kum. Jonga indlela elungileyo ndinguye.
Ngakumbi kufuneka, ngakumbi ungenza njalo. Indlela abanye abantu umgwebi kwenu, ubume bakho umphakamo, yimalini imali yenza ingaba zonke kakhulu ebalulekileyo kwi-China. Njengokuba umthetho, Isitshayina abantu kuba kakhulu efanayo iinjongo ebomini, ngokunjalo: Eli kakhulu kakhulu njengoko imfundo yeyona ebone njengoko indlela ekhuselekileyo elungileyo elizayo. Kufumaneka kwi-okulungileyo ngezifundo kakhulu kubalulekile ukuba Isitshayina abantu onke amanqanaba. Ukuba ufuna waya omnye phezulu iyunivesithi kwi-i-shanghai okanye Beirut (okanye nkqu ngcono ukuba yayo s omnye phezulu iyunivesithi kwi-i-american England Australia) ngoko ngaba ve onayo engcono ithuba landing elungileyo umsebenzi kwaye gaining ngakumbi ubuso kuba ngokwakho kwaye abazali bakho. Ukuba ndiza exaggerating. Kwi-China baya kuba lemiyezo apho amadala folk hamba ukuze akwazi ukufikelela kwinani oonyana babo, neentombi, nieces kwaye nephews. Ewe, akwazi ukufikelela kwinani. Kwezi lemiyezo, Abantu plaster imiqondiso kwezi park ukuba ukubonisa umntu s Hight, umvuzo, ngezifundo, kwaye nkqu ubudala. Mna ubuqu kwakuyiminyaka a park ambalwa eminyaka emva kokwenza Kung Fu xa i-ubudala guy approached kum ukuthetha phambi ndizixelela kum okokuba yakhe granddaughter isebenza ngendlela bank, zinika kum yakhe iinkcukacha zoqhagamshelwano, kwaye yokubhala yam phantsi ukunika wakhe. Ndiyacinga ukuba ungasoloko kuxhomekeka grandpa ukuzama hook kuwe phezulu. Wena musa t nkqu kufuneka ukuba ushiye indlu. Ukuze uvale phezulu, nantsi ividiyo eyenziwe abanye Isitshayina girls. Kuyo, baya kuvuma ingoma malunga benza ntoni silindele ukusuka guys kuba umtshato. Ividiyo unika abanye ucacile izimvo into i-yenkcubeko kwaye societal anokubakho ngala. Kubalulekile kananjalo a stab kwi i-ngaphambi koko ividiyo eyenziwe abanye guys complaining malunga hayi ekubeni nako ukufumana umfazi ngenxa ngokwesini imbalance.
Layo s kanjalo isiqhamo esibi, ingakumbi kwi-China. Ukuba unayo imali kwi-China, unako ukwenza into, kwaye ndiya kuthetha nantoni na. Imali yenza massive umahluko ngokomthetho wakho loluntu ixabiso, ngenene yindlela ecacileyo isibonisi umntu olilungu ngempumelelo okanye hayi. Fuck ubomi amava, personal uphuhliso. Ezininzi Entshona abantu kuthi Isitshayina girls ingaba igolide diggers kwaye mna kunzima ukusebenza ngokupheleleyo awuvumi kangakanani nezi nkacazelo oku, mna ve weva ke ezininzi phinda-phinda kwaye yayo s rhoqo ukususela abantu abathe kakhulu limited isixa-mali amava kwaye musa t ngenene ukuqonda Isitshayina icala coin. China sele ilanlekile ka-amahlwempu abantu (ngaphezu kwesiqingatha le bonke ingaba kwezolimo abasebenzi) kwaye xa ufuna kwakhona amahlwempu kubalulekile fucking sucks nisolko stuck kunye shitty zonyango care, kufuneka kudla low umgangatho ukutya, kwaye unoxanduva ngomhla inceba ye-non-amahlwempu. Xa ke iza imali, Isitshayina abantu prioritize ngayo ngaphezu kwento yonke (Ewe, ndim generalizing apha) njengoko inika ukhuseleko ukuba ufuna akukwazeki ukufumana nayiphi na enye indlela kwi-China. Layo s ezenzeka senzo kuba Isitshayina umfazi ukuba ingaba efihlakeleyo bank i-akhawunti kwaye squirrel imali kude kuyo nje a yogcino kwimeko umtshato lahluleka. Yokucinga ngayo ngale ndlela: medieval amaxesha kokuba nobility kwaye peasants. China ingu kakhulu efanayo le. Xa ufaka otyebileyo ufuna njenge nobility, kodwa xa kufuneka kwakhona amahlwempu uhlala a peasant s ubomi. Ngokuqinisekileyo, kukho elikhulu oluphakathi udidi oluphakathi kwi-China kunokuba bekungayi kwi-Medieval phinda-phinda, kodwa China ngu pretty kakhulu kwi-mat kunye century Yurophu. Avareji ujonge girls musa t idla get kakhulu ingqalelo. China kakhulu materialistic. Oku ngenxa nokungabikho inkolo nokhuseleko ekubeni imali kuthetha ukuba kufuneka yokhuseleko kwaye abantu umona kuwe. Kunye imali iza expensive izinto zokudlala kwaye zinokuphathwa abafazi. Otyebileyo guys kwi-China kakhulu rhoqo kuba ezininzi abafazi kwi-hamba ngoko ke lena yenza i-avareji ujonge i-girls engabonakaliyo kwi-uthelekiso. Andinguye esithi ukuze babe get akukho ingqalelo abo ngokuqinisekileyo ukufumana ezinye. Yintoni ndinguye esithi loo beautiful abafazi kwi-China get A L O T ka-ingqalelo, efana nokuba ucinga ukuba ‘x’. Zinokuphathwa Isitshayina kubekho inkqubela unako ukuhlala ekhaya kwaye vula Momo okanye WeChat kwaye linda imizuzu, emva kokuba abo imizuzu guaranteed kuya kubakho ubuncinane guys ukuzama ukuthetha kuye kwaye bonke abo babeya kuba ethanda umhla wakhe, kuthenga yakhe sangokuhlwa, kwaye bang yakhe. Oku zonke relates emva ngokugcina ubuso kwi-wonke yakho loluntu emi, essentially. Ukuba ujonga engalunganga kuwonke-wonke, kufuneka ukuba yokulahla ubuso, ukuba ujonga okulungileyo, kufuneka kwakhona gaining ubuso, into Isitshayina ngabantu udidiqaccel ngobukho. Ubuso ingaba kutheni ilanlekile ka-girls ingaba ngakumbi selective malunga abo baya itshata, baya kufuneka zabo umzali ke, ukuvunywa enye. Ukuba babe tshata ngaphandle usapho lwabo s intsikelelo, banako kuba ostracized ukusuka bubonke usapho lwabo. Isitshayina girls musa t jikelele hangs ngomgca langaphandle guys. Kukho noba romanticcomment inzala, okanye akukho t. Kukho ezizodwa kodwa njengoko jikelele umthetho na kubekho inkqubela oko kukuthi hanging jikelele kunye langaphandle guy ngu njengokuba ingaphakathi-njalo kuye. I-Isitshayina umsebenzi ngakumbi jikelele courtship kunokuba casual dating okanye seduction njengoko casual dating yi ngakumbi western ingcamango kwaye seduction kwenzeka ngaphezulu France okanye Italy kwe kwi-e-Asia. Ukuba awuvumelani nam ke nceda funda Memoirs ye Casanova (a mere iphepha ixesha elide) kwaye athabathe uhambo ukuba France kwaye Italy. Kwinqaku ka-courtship ngu ukwenza ulawulo loluntu unxulumano ukuba supplies omabini kunye abanye ifomu loluntu ixabiso. Kanjalo ingaba i-kulungile-ochaziweyo imigaqo okanye izikhokelo kuba abantu ukuba balandele. Nabani na abantliziyo weva Isitshayina girls kuthi Isitshayina abantu musa t ukwenza oko, okanye Isitshayina abantu aren t ngolohlobo uza kufumana ndiyithetha. Ngenxa elide imbali kwaye jikelele iqela conformity ka-Isitshayina inkcubeko, abantu kuba kakhulu stronger unye into Isitshayina ngabantu kwaye adhere to a ngokubanzi wavuma phezu namanani. Oku kuthetha ukuba Isitshayina abantu end phezulu kakhulu ekubeni efanayo ngamnye enye, njengokuba endaweni kwi-West apho abantu bamele kakhulu ngakumbi individualized. Kukho ngakumbi kulo kunokuba ukuba kodwa a nutshell, abo bamele ibaluleke kakhulu izinto Isitshayina abantu. I-unye ka-marrying kuba uthando sele kuphela kuba ethandwa kakhulu kwiminyaka yakutsha nje kwaye nkqu? isn t a kwesigqibo kwiindawo ezininzi marriages. Oku akuthethi t kuthetha ukuba abantu China musa t uthando kwangaye okanye ukuba uthando akubonakali t mba, kodwa ke ingaba ithetha ukuba abantu bazimisele tshata kuba isimo kwaye imali. Uninzi avareji aqhuba earners ukulifumana kakhulu kusenokwenzeka ukufumana i-incredibly avareji girlfriend. Kwezi budlelwane nabanye, nangona, abafazi overwhelmingly wear i-pants ngenxa yokuba siyazi zabo guy awunakho ukwenza ngcono kakhulu. Inyaniso rhoqo painful. Langaphandle guys kuba ezininzi assumed ixabiso sele, nokuba ukuthelekisa ixabiso, kwaye girls ukufumana kwabo umdla ngokulula ngenxa yokuba izinto ezahlukeneyo. Oku trend ukuba carries phezu ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye. Nkqu girls wam lizwe, e-Australia, get ngenene onemincili phezu European guys ukwenza oko pretty cacisa indlela widespread oku phenomenon. Hlala usebenza ngenxa yam elizayo amanqaku apho ndiye kufundisa kangakanani ukuba bathethe, ukutsala, phezulu tier Isitshayina girls ilungelo indlela. Trust kum, nisolko ezingayi ufuna unobuhle ngaphandle. De ixesha elizayo
Indlela Kuhlangana Abafazi kwi-China - Eyona Iindlela Asian Uthando Zephondo →